Gadzirisa zvirevo nemifananidzo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Masvomhu anogara ari dambudziko here kwauri? Iwe unoshanda nesimba muchikoro asi, zvisinei nekuedza kwako kwakawanda, iwe unonetseka nenhamba uye kunyangwe equation yakapusa inoita kunge mutambo usingakundike? Huya, usaore moyo, pamwe ungangoda kuchinja nzira yako yekufunda. Zvakadii kutora mamwe maturusi edzazvino ekukubvumidza iwe kuti udzidze mathematics, semuenzaniso nekupa mukana we kugadzirisa kutaura nemifananidzo.
Unoti sei? Inonzwika kunge sainzi ngano? Ndinokuvimbisai kuti hazvina kudaro. Verenga gwaro iri ratino taura nezve mukana uyu, rakapihwa nemaapplication akareruka anowanikwa kune ese maAroid madivayiri uye neiyo iPhone neIpad yakatsaurirwa kugadzirisa akasiyana mibvunzo yemasvomhu. Izvi zvishandiso zvakapusa kushandisa, uye kazhinji kusununguka. Uchaona kuti, kana uchiverenga gwaro iri, haunetse nekunzwisisa mashandisiro awo, zvakare nekuti ini ndichatsanangura nhanho nhanho mashandiro avo.
Uye haina kumira ipapo! Mazhinji emashandisirwo aya, kutaura zvazviri, haana kuganhurirwa kugadzirisa kutaura nemifananidzo, asi tsanangura zvakadzama maitiro ese ekunzwisisa resolution. Muchidimbu, iwe uchagadzirisa dambudziko remasvomhu rinokutambudza, asi panguva imwe chete, iwe zvakare uchanzwisisa kuti ungazvigadzirisa sei iwe pachako nguva dzinotevera. Izvo zvaunoda ingori kamera yeako smartphone kana piritsi. Edza, huya!
Iko kushandiswa kunogadzirisa kutaura nemifananidzo
Mamwe mafomu ekugadzirisa mafoto mafoto
Kana iwe uchibvumirana, ngatitange kunanga kuchimiro uye tione zvimwe app gadzirisa kutaura nemifananidzo kuiswa pane zvese Android uye iOS / iPadOS.
Photomath Ndicho chekutanga chishandiso chandinonongedzera kwauri kuti chinokwanisa kugadzirisa matambudziko akaomarara uye akasiyana masvomhu, nekungozvigadzira nekamera yeiyo Android chishandiso (iko kunyorera kuri kuwanikwa mune zvimwe zvigadzirwa zvitoro zvisina Google services) kana iOS / iPadOS.
Iko kunyorera kunopa kutsanangurwa kwakajeka muItaly uye kunoenderana nematambudziko mazhinji emasvomhu. Inotsigira kuwedzera nekubvisa, kuwanda uye kupatsanura, masimba uye radicals, zvidimbu uye zvirevo nezvidimbu, mitsara, logarithmic uye trigonometric expression, masisitimu, kusaenzana, zvigadzirwa uye zvinosanganiswa. Iyo yemahara yemahara, asi kuti uwane yakajeka tsananguro yemasvomhu, iwe unofanirwa kunyorera kune kunyorera kutanga pa € ​​10,99 / mwedzi.
Izvo zvakati, mushure mekuisa uye kutanga Photomath, sarudza mutauro wezvaunofarira (semuenzaniso. Italian) uye dzvanya bhatani Apa toenda. Wobva wadzvanya kuburikidza nemashizha eruzivo ayo anoratidza mashandisiro anoita iyo app uye tinya pane chinhu Zvaitwa (o Salta, kana iwe wafunga kusabvunza kwavari). Wobva waratidza chako age, cindezela bhatani Zvadaro, taura kana uri vadzidzi, baba ari purofesa uye tinya bhatani Zvaitwa. Wobva wapa Photomath kuwana kamera.
Paunenge wapedza, isa chimiro chemasvomhu iwe chaunoda kugadzirisa. Tarisa uone kuti iko kunyorera kuri kunyatso tarisa pane fomu yemasvomhu mubhokisi repakati iro rinoshandiswa kuongorora uye kudhinda Shot yakaiswa pasi pechidzitiro, kutora mifananidzo pairi. Iwe uchaona kuti chirevo chichaongororwa uye kuongororwa munguva chaiyo. Mukubwaira kweziso, ichaonekwa seyakaongororwa pane yako skrini skrini.
Kumberi zvishoma pasi, zvisinei, iwe uchaona mhedzisiro yeshoko. Ukabata bhatani Ratidza matanho ekugadzirisa, skrini nyowani ichavhura kwaunowana rumwe ruzivo rwauchazoda kuti udzidze mathematics.
Kunze kwekugadzirisa chirevo uye nhanho dzakanangana nekutevera kuzvigadzirisa, imwe pazasi peimwe, iwe unowana dzimwe tsananguro dzekuti chirevo chacho chakagadziriswa sei. Nekubata nhanho dzakasiyana dzinozoratidzwa pachiratidziri, unogona kuona ese masvomhu mitemo yakashandiswa, iine tsananguro dzakadzama. Kusundira bhatani Goverana (kumusoro kurudyi), pachinzvimbo, iwe unogona kugovana chirevo uye chisarudzo chayo kuburikidza nehukuru hwemasocial network, kana iwe unogona kungozvichengeta kune chako kifaa.
Kana iwe uchida kuisa pamurume chirevo kuti ugadzirise, mune huru Photomath skrini unogona kubaya bhatani Calculator. Izvi zvichavhura skrini nyowani uko, nekuda kwekhibhodi ine zviratidzo zvemasvomhu, iwe unogona kuisa ese manhamba aunoda muchirevo, vadzime zvachose uye pamwe ungachinja iwo. Zvekare, iyo Photomath app ichaverenga mhedzisiro ipapo uye iwe unogona kuigovana zviri nyore.
Photomath inocherechedzawo mataurirwo akagadziriswa, ine nhoroondo yaunogona kuona chero nguva. Unozviita sei? Ingotinya pane icon notibhuku rine wachi (mukona yekumusoro yekurudyi yekona huru yekushandisa) uye ndizvozvo.
Kana pane imwe nguva iwe uine mibvunzo nezve mashandiro ekushandiswa, chikamu Service pakati, inowanikwa mumenu iyo inogona kudaidzwa kumusoro nekudzvanya bhatani (≡) (kumusoro kuruboshwe) inokupa iwe resolution yemamwe matambudziko akakurumbira.
zvakare Shamwaridzana, mhinduro inobatsira kugadzirisa kutaura kwesvomhu nemufananidzo. Ichi chishandiso chinowanikwa mahara zveApple (zvakare mune zvimwe zvitoro) uye iOS / iPadOS uye inowirirana neasinga nyanye kushambadzira mireza. Kana iwe uchida, zvinokwanisika kunyorera kunyorera kutangira pa € ​​5,49 / mwedzi, kubvisa kushambadza uye kuwana tsananguro yakadzama pakugadzirisa matambudziko esvomhu, nematanho-nhanho-nhanho anongedzera iwo anoshandiswa mitemo.
Mushure mekuisa uye kuvhura Cymath pane chako chishandiso, tinya bhatani Camera (kurudyi) uye nekupa iyo mvumo inodikanwa kuti uwane kamera. Tevere, fomura chirevo chaunoda kugadzirisa, chichiita kuti chiwire mukati me caja iri pakati pechidzitiro uye tinya iyo ▶ ︎ bhatani riri pazasi. Muchiratidziro chitsva chinovhura, sekunge se "mashiripiti", iwe unowana iko kugadziriswa kutaura, kuzere nematanho anodikanwa ekugadziriswa kwayo.
Zvakare, ndinoda kunongedzera mukana wekutaipa kutaura nekhibhodi (kana nechimwe chikonzero ini ndisingakwanise kuita nekamera), nekudzvanya bhatani Yekhibhodi iripo kumusoro kuruboshwe rwechidzitiro chikuru chekushandisa. Kubaya bhatani pachinzvimbo (≡), kumusoro kuruboshwe, uye kusarudza chinhu Historia Kubva pane yakavhurika menyu, iwe unogona kutarisa nhoroondo yezvakambogadziriswa zvirevo.
Imwe mhinduro inobatsira ndeye Microsoft math solver iyo, sekutaurwa kwazvinoitwa nezita rayo, inokutendera kuti uite nekukurumidza kuverenga masvomhu nekumisikidza zvirevo kuti zvigadziriswe nekhamera yechigadzirwa chako. Izvo zvakare zvinokugonesa iwe kutaipa zvirevo pamwe nerunyoro pamwe nekhibhodi kudhinda. Inowanikwa mahara pane ese ari maviri Android (kusanganisira zvimwe zvitoro) uye OS / iPadOS.
Mushure mekuisa uye kutanga Math Solver pane chako chishandiso, sarudza mutauro waunofarira kumisikidza (semuenzaniso. Italian) uye dzvanya bhatani Nhanganyaya yakaiswa pazasi. Wobva watarisa iyo inodzidzisa dzidziso inotsanangura mashandiro ayo, kana chete danho iri nekudzvanya bhatani rakakodzera riri kumusoro kurudyi.
Panguva ino, cindezela bhatani Tora mufananidzo iwe pachako uye ipa Math Solver kuwana kamera yemuchina; wobva wagadzika chirevo chaunoda kugadzirisa, uchitarisira kuti chiri zvachose mukati me caja yakaiswa pakati pechidzitiro uye pinda denderedzwa bhatani pazasi pechiso.
Wobva wadzvanya pane bhatani Ramba wakadaro uye pachiratidziro chakavhurika iwe uchaona kugadziriswa kweshoko rakagadzirwa izvozvi. Kubaya bhatani Ona matanho ekugadzirisa, iwe unogona kuona nhanho dzakatungamira mukugadziriswa kwayo nezvose zvinotsanangurwa nezvenyaya iyi. Zvakare, kana uchitsikisa chidzitiro, unogona kuona chirevo mu graphic, ongorora matambudziko akafanana, chokwadi Video zvine chekuita neInternet uye unokwanisa kuwana zvimwe zvinobatsira zvekudzidza.
Kuti uwane dzimwe nzira dzekunyora zvirevo, tinya bhatani Dhirowa, zvine chekuita nerunyoro, uye Yekhibhodi, kuti udzokere kumodi iyo inokutendera kuti unyore kubva kubhobhoyo.
Pane mamwe maitiro ekugadzirisa kutaura kwemifananidzo kuti iwe unogona kufunga. Ndinozvinyora pazasi - pamwe unogona kuwana mumwe akakukodzera.
FastMath (Android / iOS / iPadOS) - sekuratidzira kunoita zita rayo, iyo inokutendera kuti uite nekukurumidza kuverenga masvomhu nekuronga zvirevo kuti zvigadziriswe nekhamera yechishandiso chako. Inogona kutorwa pasi mahara, asi kuti uwane zvese zvainoita inofanirwa kunyorera kubva ku € 10,99 / mwedzi.
Math scanner (Android / iOS / iPadOS) - ichi ndechimwe chishandiso chiri muchikamu chiri kubvunzwa kuburikidza icho chinogoneka kugadzirisa masvomhu kutaura uchishandisa kamera yechigadzirwa chako. Kuti ubvise kushambadzira uye ushandise ese mashandisirwo echishandiso, unofanirwa kubvumirana kunyoreswa kutanga pa € ​​3,99 / vhiki
Calculator Uyezve (Android) - Iyo ndeye yemahara mhinduro yeApple kuburikidza iyo iwe yaunogona kugadzirisa yemasvomhu matauriro nekuaomera iwo neyako kifaa kamera. Iyo zvakare inosanganisa inoshanda yeyuniti inoshandura iyo inogona kushandiswa nechinangwa ichi. Kuwana kune ese mashandiro ayo kunoda mukati-app kutenga kutanga pa € ​​1,09.
Maitiro ekugadzira chat newe pachako paWhatsApp